Bekunokwenzeka ntoni ukuba uHillary Clinton uphumelele uMongameli ka-2016? - Ezopolitiko
Eyona Ezopolitiko Ngaba Ngokwenene Izinto Zingazahluka Ukuba uHillary Clinton EbenguMongameli?
Ngaba Ngokwenene Izinto Zingazahluka Ukuba uHillary Clinton EbenguMongameli?
Umtyunjwa we-Republican wase-Republican u-Donald Trump kunye no-Hillary Clinton otyunjwe yi-Democratic baxhawulana emva kwengxoxo kamongameli kwiYunivesithi yase-Hofstra ngo-Septemba 26, 2016 eHempstead, eNew York.Ifoto nguDrew Angerer / Getty Izithombe
Njengokuba u-2017 esondela esiphelweni, kungenzeka njani ukuba unyaka ophelileyo ubukhe wonyulwa njengo-Hillary Rodham Clinton njengomongameli we-45 wase-United States? Ngokucacileyo, apho umntu eme kwinqanaba lezopolitiko uchaza le mpendulo yokucinga. Okwangoku, intlekele kukuba imeko yezopolitiko yaseMelika iphakamisa ukuba, nokuba uMongameli uDonald Trump akathandwa kangakanani namhlanje, uMongameli uClinton ngekhe amkelwe ngcono.
KwiRiphabhlikhi, uClinton wayeza kuba yintlekele. Ngokombono wabo, iMelika ibiya kuqhubeka nokuqhubeka nendlela eyintlekele kaMongameli uBarack Obama. I-Obamacare yayiya kusinda. Ngekungekho mali irhafu. NgeNkomfa yeRiphabhlikhi, iNkundla ePhakamileyo iya kuhlala ingavaliyo ngo-4-4 njengoko iSenethi yayingayi kuqinisekisa umtyunjwa wakhe. Ukujongana nabantu abambalwa kunye namaqela anomdla okhethekileyo, nto leyo iphambili kwiDemokhrasi, ngekhe kwaqhubeka ukwahlula isizwe.
Umgaqo-nkqubo wezangaphandle ungalunganga phantsi kuka-Mongameli u-Clinton, ngewayenqabile ukuthatha indawo enzima ngokuchasene ne-North Korea kunye no-Kim Jung Un, bekhetha ukulandela umgaqo-nkqubo ongaphumelelanga wokuba nomonde ngobuchule. I-NATO iya kuqhubeka nokuhlala abakhweli besimahla kunye ne-US isabambe isabelo sengonyama kwinkcitho yezokhuseleko. IYerusalem ngeyayingekaziwa njengekomkhulu lakwaSirayeli. I-Islamic State iya kuhlala ilawula izilayishi ezinkulu ze-caliphate e-Iraq nase-Syria. I-China iya kuqhubeka nokusebenzisa urhwebo kunye nemali kunye nokwandisa iimpembelelo zayo nangakumbi.
Lilonke, uClinton ngewayenze zombini umgxobhozo eWashington nakwindawo enzulu ngakumbi nangakumbi kwaye inobungozi kuluntu lwaseMelika. Ishishini lasimahla liya kuba simahla. Kwaye imarike yemasheya kunye neentswela-ngqesho zonyaka ophelileyo ngekhe zenziwe.
Iidemokhrasi, ewe, ngekhe zenze icala elichasene ngokupheleleyo. Ekhaya, ukumiselwa bekuya kuhlala kuphela kwendlela yokulawula, inikwe iCongress ezinikele ekuqinisekiseni ukuba uMongameli uClinton wayeyintloko yexesha elinye. Umnqophiso ogqityiweyo kuzo zombini iziphelo zePennsylvania Avenue ngewunike uClinton ithuba lokusebenzisa isebe elilawulayo njengeyona ndlela yokukhusela abaphakathi nabaphantsi kwizityebi. Abonyuliweyo njengabagwebi bomdibaniso bebengabonakalisa oku kugxila. Xa iNdlu yeeNgwevu yenqabile ukuqinisekisa iNkundla ePhakamileyo yesithoba inxulumana nobulungisa, oko kukhanyela kwanika i-White House ipulpiti yokuxhaphaza ukuba ihlasele iRiphabhlikhi. Ngaba ubongameli bukaHillary Clinton buya kwahluka kakhulu?IJEWEL SAMAD / AFP / imifanekiso kaFetty
Kumgaqo-nkqubo wezangaphandle, uClinton ngewayesongele ngokurhoxa kwiTrans-Pacific Partnership (TPP), endaweni yoko ethetha-thethana notshintsho olwamkelekileyo, oko ke kunciphisa impembelelo ye-China e-Asiya. Njengokuma kwakhe okunyanzelekileyo okwakhokelela ekungeneleleni kwaseMelika malunga neKosovo ngo-1999 xa umyeni wakhe wayengumongameli kwaye ngo-2011 eLibya kwabonisa, uClinton ngewayengoyena unzima kwi-Islamic State nase Russia. Ngewayephelise ubukhalipha kwakamsinya kwaye wahlanganisa izizwe zama-Arabhu nezamaSilamsi ngokuchasene ngakumbi namaSilamsi. Njengomfazi, ngewayeyityhalile i-Saudi Arabia kunye nenkosana yesithsaba esincinci ukuba ibe nzima ngakumbi ekuphuculeni. Kwaye ngekhe akutyeshele ukuphazanyiswa kweRussia kunyulo lwaseMelika. Umongameli u-Vladimir Putin uya kuba nzima kakhulu kwaye angabinakho ukumtsala u-Clinton njengoko ene-Trump. Okwangoku, uClinton wayengathandwa kakhulu, kunye nenqanaba elifanelekileyo kwinqanaba leepesenti ezingama-40.
Ewe kunjalo, akukho mntu waziyo ukuba umongameli kaClinton ebeya kwenza ntoni ukutshintsha unyaka ophelileyo. Ukuqwalaselwa okumbalwa kufanelekile. Ekhaya, imarike yemasheya ibiya kunyuka kwaye ukungabikho kwemisebenzi bekuya kuhlala kusezantsi nokuba ngubani owayengumongameli. Zombini zichaphazeleka ngamandla yimikhosi yexesha elide kunonyulo lukamongameli, eziphantse zibe nefuthe elincinci kuqoqosho. Ngaphandle kwamathandabuzo, uClinton ngewayirhoxisile i-TPP.
Kodwa ngewayesehleli kwisivumelwano sokutshintsha kwemozulu eParis nakwisivumelwano senyukliya ne-Iran esinokuthi sibonakalise ukuba zezona mpazamo zimbini zimbi zenziwe nguTrump ekurhoxiseni nasekuqinisekiseni. Malunga ne-Islamic State, lonke uphawu lubonisa imeko enoburharha. Malunga neNyakatho Korea, uthethathethwano lwaluya kudlala indima eyomeleleyo. Kwaye okona kulungileyo (kwaye mhlawumbi kuphela) isibonelelo sikaClinton ngekhe sibe ngumgaqo-nkqubo nge-tweet.
Ngenxa yokuqhuma kwamatyala okuziphatha gwenxa ngokwesondo, owayesakuba nguMongameli uBill Clinton ngewayengaphezulu kwehlazo kunye nomthombo oqhubekayo wempikiswano. Uphando lwaseRussia belungazukugxila kwiTrump, kodwa kungenelelo lwaseRussia. Kwaye kunokwenzeka ukuba uTrump angade afake isimangalo esicelomngeni ukuba semthethweni konyulo.
Konke oku kukuthelekelela. UClinton akazange aphumelele. UTrump wenze. Isiphetho esibuhlungu kukuba akukho mntu wayenokuba nezinto ezifanelekileyo zokuba ngumongameli osebenzayo kunye nokudibanisa.
UGqirha Harlan Ullman ungusihlalo weenkampani ezimbini zabucala; Umcebisi omkhulu kwiBhunga laseAtlantic kunye nabaPhathi beShishini kuKhuseleko lweLizwe. Incwadi yakhe yamva nje ngu I-Anatomy yokusilela-Kutheni iMelika iphulukana nayo yonke iMfazwe iqala . Ngu @harlankullman.
Yabona, i-'Avengers: Imfazwe engapheliyo 'iTrailer ilapha
AbantakwaboLucas: Amawele, abahlekisi kunye nabahlobo baBantu
'Izinja Zemfazwe': Ilungelani? Ngokuqinisekileyo akunanto
I-Bachelor Pad ka-Adam Levine yiWonderland kaJohn Mayer
ixesha lolawulo 2 isiqendu 17
Maddox elona phepha lilungileyo kwindalo iphela
Iprojekthi yokubaleka mychael knight ukufa
Yeyiphi inkqubo ye-TV ekufuneka uyibukele kwi-Netflix
Umdlalo weetrone incwadi 6 umhla wokukhutshwa ngo-2019
ioyile ye-hemp yoxinzelelo lwenja
Umboniso bhanyabhanya apho abazali bathuthumbisa umbulali wabantwana